Uyenza njani i-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyenza njani i-twitter?
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 268
Umnatha weentaka odumileyo ukhula ngokuxhumaxhuma kunye nemida. Ukuqokelela abalandeli ngosuku ngalunye oludlulayo. Ewe, iye yathandana nabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-393 kwihlabathi liphela, abaye bathatha isigqibo sokujoyina i-twitter. Nokuba kungenxa yokusebenza kwayo okuqondwa kakuhle ekuziseni naluphi na uhlobo lolwazi kubasebenzisi kwimizuzwana embalwa okanye ngenxa yokulula kwayo okungenakuphikiswa ukwenza njalo.
Nasiphi na isizathu, I-twitter ibe yinto efanelekileyo ye-microbloggigng kumntu wonke. Ngabalinganiswa abangama-280 kuphela, unokuxelela umhlaba wonke uluvo, inqaku leendaba, thetha ngamava akho, izinto ozithandayo, khangela ulwazi phakathi kwezinye izinto ezininzi.
Ukuba izicwangciso zakho kukujoyina le nethiwekhi yoluntu, uya kuyidinga yonke ingcebiso kunye neengcebiso onokuyifumana kwi-Intanethi, ukuze ufumane okuninzi kuyo kwaye ube namava amnandi.
Ke ungayenza njani i-twitter?
I-Twitter liqonga lonxibelelwano olukhawulezileyo onokufikelela kulo kwiphepha elisemthethweni https://twitter.com/home?lang=es. Apha uya kufumana yonke into oyifunayo ukuze uthathe amanyathelo akho okuqala kule nethiwekhi.
Into yokuqala ongayibona luphawu lwenkampani. Iprofayile yentaka, enika igama kule nethiwekhi, kuba iguqulela ukukrokra kweentaka.
Ukujonga okona kubalulekileyo.
Uyakwazi ukujonga ii icon ezahlukeneyo kwiscreen. Phezulu ngumsebenzisi, ipaswedi kunye neebhokisi zokungena ukuba sele umanyene. Kwindawo esembindini uza kubona isiqubulo esithi "kwenzeka ntoni" nangaphantsi kwebhokisi "yokungena kunye nokungena".
Apha ngezantsi, uza kubona uthotho lweempawu ezinje ngo "Malunga", "indawo yoncedo", "Imiqathango yenkonzo", phakathi kwabanye. Unokubonisana nayo nangaliphi na ixesha ukuba unemibuzo.
Ucofa kwi icon icon. Isikrini siza kuvela ngaphezulu koku kungasentla. Kule sikrini, i-twitter iya kukubuza igama, iphasiwedi kunye nedatha ehambelana nomhla wakho wokuzalwa.
Sukuba nexhala ukuba ucinga ukuba awuzukubonelela ngolu lwazi, kuba i-twitter ikwenza kucace ukuba naluphi na ulwazi olunikezelayo alunakuze lwenziwe lubhengezwe.
Phakathi kokukhetha kokubhalisa unokukhetha phakathi kwe-imeyile kunye nenombolo yefowuni. Kuzo zombini iindlela, uya kudinga ukuqinisekisa ubunyani bedatha yakho. Ukwenza oku, kuya kufuneka ube nesixhobo sakho esiphathwayo okanye ungene kwi-imeyile yakho kwenye ithebhu yesikhangeli.
Nje ukuba ufake idatha yakho, uya kufumana i-imeyile enekhowudi yokuqinisekisa ekufuneka uyibeke kwibhokisi ehambelana nayo. Oku kuya kubonakala wakube ucofe i icon "elandelayo" ebekwe kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini.
Kwakhona, ukuba uyicelile, unokufumana umnxeba wokufumana ikhowudi yakho yokuqinisekisa.
Ngale nkqubo, sele ubhalisile kwi-twitter. Ngoku ungaqala ukuseta iprofayili yakho. Beka umfanekiso wakho we-avatar, kwintloko, zichaze kwi-biography yakho, bhala idilesi yewebhu okanye uqale ukulandela abantu.
1 Ke ungayenza njani i-twitter?
2 Ukujonga okona kubalulekileyo.
3 Iinketho zobhaliso
Uyifaka njani iTelegram?
Ngaba uyafuna ukucima iakhawunti yakho ye-Facebook?